Les Bénédictins -tb ibekwe, izolile, i-wifi, intuthuzelo
Indlu entsha Beautiful kwi endala wayibuyisela abefundisi of Menetou Salon (imizuzu eli-15 kuphela ukususela Bourges), linempahla sisimbo wanamhla, kunye okulala 2, izindlu zangasese 2 ishawa kwigunjana, kukho ikhitshi bexhobile, igumbi lokuhlala, flat screen TV kunye WiFi free ukufikelela.
Kubandakanya ukufudumeza, ukucocwa kunye nokunikezelwa kwamaphepha kunye neetawuli.
Ifumaneka ukuba irente ukususela ngo-Epreli, amagumbi ethu aya kuba angatshayi kwaye angafikeleleki kwizilwanyana. Kummandla okufutshane: iindawo zokutyela (kubandakanywa "iCheu L'Zib" kunye neLe Fluteau), iivenkile, ikhemesti kunye neofisi kagqirha. Indawo yokupaka iyafumaneka ePlace de l'Eglise.
Kummandla okufutshane: iindawo zokutyela (kubandakanya "Cheu L'Zib" kunye neLe "Bistrot Monestro", iivenkile, ikhemesti kunye neofisi kagqirha. Indawo yokupaka kawonke-wonke yasimahla iyafumaneka ePlace de l'Eglise.